FANOLORANA SAMBOADY IREO BEN’NY TANANA FARITRA MAHATSIATRA AMBONY – Région Haute Matsiatra
FANOLORANA SAMBOADY IREO BEN’NY TANANA FARITRA MAHATSIATRA AMBONY
#Fanolorana_Samboady ireo Ben’ny Tanàna manerana ny Faritra, ny Depioten’Isandra sy Ikalamavony
Tontosa androany ny Lanonana manetriketrika fametrahana samboady ireo Ben’ny Tanàna ato anatin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony sy ny Depiote voafidy tao amin’ny Distrikan’Isandra sy Ikalamavony.
Nanatrika ity lanonana androany ity ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny Solotena avy amin’ny fiadidiana ny Repobilika, ary ireo manampahefana eto an-toerana izay notarihin’ny Goverinora sy ny Prefet ary ireo Solombavam-bahoaka eto amin’ny Faritra.
Nampisalotra Samboady ireo Depiote mirahavavy ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena ary nitso-drano azy ireo.
Nitohy tamin’ny fametrahana ny Samboadin’ireo Ben’ny Tanàna ny fotoana. Ho mariky ny tsy fisian’ny elanelana eo amin’ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, izay minisitra mpiahy ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, sy ireo Ben’ny Tanàna, dia ny tenan’Andriamatoa Minisitra mihintsy no nametraka ny samboadin’ireo Ben’ny Tanàna rehetra.
Hentitra ny Toromarika sy ny hafatrafatra avy tamin’Andriamatoa Minisitra:
Ny fisalorana samboady, hoy izy, dia mitaky andraikitra sy finiavana hikaroka hatrany izay hampandroso; manaraka ny rindran-damina apetraky ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana , miala amin’ny làlan-tsain’ny fanilihana andraikitra, ny fitavozavozana, ny fanararaotam-pahefana, ny tsy maty manota sy ny kolikoly ary ny fandanindaniam-poana ny volam-panjakana.
Nanome toromarika ireo Sampandraharaham-panjakana ihany koa izy ny amin’ny tsy maintsy iaraha-miasa amin’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.Antompisian’ny STD, hoy ny Minisitra, ny hanome tosika ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ka antok’izany ny fidinana ifotony sy ny fifaneraserana amin’ireo mpitondra eny anivon’ny Kaominina rehetra, tsy asiana fanavakavahana.
Mila fifanomezan-tànana sy fahatongavan-tsaina ny hampandroso ny Faritra Mahatsiatra Ambony!